दुनियाँ चकित हुने चीनको चमत्कार : कृत्रिम चन्द्रमा बनाएर अब चीन दिन रात नै उज्यालो ! (तस्विरहरू सहित) - Purbeli News
दुनियाँ चकित हुने चीनको चमत्कार : कृत्रिम चन्द्रमा बनाएर अब चीन दिन रात नै उज्यालो ! (तस्विरहरू सहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ०३, २०७५ समय: २०:५१:४६
यसभन्दा पहिले पनि प्रकाश दिने कृत्रिम वस्तु आकाशमा पठाउने कोशिश भएको थियो । तर यस्तो योजना असफल भएको थियो। यस्तो प्रयास सबैभन्दा पछिल्लो पटक रूसले सन् २०१७ मा गरेको थियो। १४ जुलाई २०१७ मा रूसले कजाकिस्तानको ब्याकोनुर स्पेसपोर्टबाट अन्तरिक्षमा सोयुज रकेटबाट एक बस्तु पठाएको थियो। यस बस्तुलाई चन्द्रमापछि सबैभन्दा चम्किलो भनिएको थियो। तर एक महिनामा नै यस परियोजनामा जोडिएका वैज्ञानिकले अन्तरीक्ष कक्षमा स्थापित हुन नसक्दा परियोजना बिफल भएको बताएका थिए। जनबाेलीबाट